Global Voices teny Malagasy » Iran: Mibilaogy miady amin’ny fankahalana pelaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Oktobra 2018 12:38 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
(Marihina fa tamin'ny 22 May 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Iraniana bilaogera vitsivitsy no nanoratra fanehoan-kevitra tamin'ny ‘Andro Iraisam-pirenena manohitra fankahalana ny pelaka ‘ tamin'ny 17 May 2009 ary nizara ny ahiahiny mikasika ny fanavakavahana mahazo ireo pelaka ao Iran.
Namoaka  taratasy misokatra avy amin'ireo mpianatra pelaka Iraniana ho an'ireo mpianatra mpikatroka hafa ao amin'ny firenena i Pesar:
Izahay, mpianatra pelaka ao Iran, dia efa an-taonany maro no nanatrika ny hetsiky ny mpianatra sy ny manam-pahaizana. Teo anivon'ny fitakiana ara-tsosialy sy ara-politika nataon'izy ireo izahay, ary nanohitra ny raharahan'ny fanavakavahana ao amin'ny fiarahamonina Iraniana . Ankehitriny, mahafantatra ny mpanandratenin'ny fahafahana sy ny mpiaro ny zon'olombelona rehetra fa zon'olombelona ny zon'ny pelaka… iharan'ny fampijaliana ratsy indrindra sy ny fanenjehana ary ny tebiteby ny pelaka eto Iran sy any amin'ny firenena hafa izay tsy misy ny fahalalahana ara-tsosialy sy araka ny maha-olombelona.
Ketabkhane has published  [fa] a series of books written by and/or about homosexuals. They explain why they decided to make their works available on their blog:
Namoaka  andiam-boky nosoratana sy/na momba ny pelaka ny Ketabkhane. Nanazava ny antony nanapahan'izy ireo hevitra ny handefa ny asany ao amin'ny bilaoginy izy ireo:
Tsy voafetra eo amin'ny fisiana ara-batana ao amin'ireo tanàndehibe sy tanànakely any Iran ihany ny fisianay. Mipetraka anivon'ny fiarahamonina Iraniana izahay. Misy fiantraikany eo aminay izany ary avelanay eo amin'izany ny soritray. Miaina ao anatin'ity fiarahamonina ity izahay. Manoratra sy mamorona hevitra ny vondronay saingy tsy afaka mamaky ny teninay ny olona raha tsy afaka miditra amin'izany izy ireo.
Nanoratra  i Gameron fa miatrika olana any amin'ny firenena Islamika izay azo hamonoana azy ireo ny pelaka. Mandà ny fisian'ny pelaka ny fitondrana Islamika ao Iran, fa tsy manampy ny mponina hianatra momba ny fahapelahana.
Andro Iraisam-pirenena Hanoherana ny Fankahalana ny Pelaka 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/22/128143/
 ‘Andro Iraisam-pirenena manohitra fankahalana ny pelaka: http://www.homophobiaday.org/
 published : http://ketabkhane88.blogfa.com/